डाक्टर छोरीले लेखिन् आमालाई ‘कण्डम’ पत्र » Khulla Sanchar
डाक्टर छोरीले लेखिन् आमालाई ‘कण्डम’ पत्र
थाहा होस् पनि कसरी आमा ! विद्यालयमा स्वास्थ्य विषयबारे प्रजनन् स्वास्थ्य, परिवार नियोजनजस्ता पाठको पढ्ने पालो आईपुग्ने बित्तिकै शिक्षकहरु नपढाइकन तिमीहरु आफै पढ भनी मुसुक्क हाँस्दै हिड्नुहुन्थ्यो । तपाईं आफै भन्नु त, सर मिसहरुले नपढाएको विषय हामी विद्यार्थीहरुले स्वअध्ययन गरेर कसरी बुझ्न सक्थ्यौँ र त्यसबेला ? कहिलेकाँही यो विषयमा के रहेछ भन्ने मनमा नउब्जिएको पनि हैन ।
कक्षामा सबैका अगाडि पढ्दा पनि साथीभाईहरुले जिस्काउलान् भन्ने डर थियो । फेरि सर, मिसले पनि गलत अर्थ लगाउनु होला भन्ने उस्तै पिर , अनि घरमा पढ्दा पनि दाजुभाई, दिदीबहिनीले देख्लान् भन्ने त्राही–त्राही । मौका हेरेर यसो पाना पल्टायो, अनि कसैले खोकेको सुन्यो कि हत्त न पत्त अर्कै पाना पल्टाउने गरिन्थ्यो ।
तर संयोगबश त्यो दिन उनको ट्वाइलेट जाम भएको रहेछ । घरका सबै सदस्य जाम खोल्न व्यस्त थिए । कोही ट्वाईलेट खोल्ने मान्छे खोज्न गए त कोही पानीको व्यवस्था गर्दै थिए । घरमा ठूलै हल्लाखल्ला मच्चिएको थियो । कामदार भेला भए र वरिपरि नियाले । ती कामदारहरुले ट्वाईलेट खोलेरै छाडे । ट्वाईलेट त रबरका तिनै आतङ्कित कन्डमले पो भरिएको रहेछ । उपस्थित सबैजना छक्क, अक्क न बक्क र दिक्क देखिन्थे ।
घरमा एकजोडी छोरा बुहारीबाहेक सबै अविवाहित, अनि डेरामा बसेका उमेरदायी केटाकेटी र पचास नाघिसकेका । घरबेटी बाआमाको अगाडि बिचरा ! ती मेरी साथी र उनका श्रीमान् लाजले भुतुक्क भए । धेरै दिनसम्म आमाबुवाको आमुन्ने सामुन्नेपर्नै सकेनौं भन्थे ।
तपाईंलाई थाहै होला यो प्रसङ्गका बेला म चिकित्सा विषयको पढाई शुरु गर्दै थिएँ । अब भने मलाई यौन र कन्डमका बारेमा धेरै बुझिसकेकी थिएँ । त्यसैले मैले मेरी साथीलाई गाली गर्न थालें । आफू र आफ्ना घरमा बस्नेबाट गल्ती हुन गए होस गराउने तिम्रो काम हो, किन चुप बस्यौ भनी सोधें ।
उनीहरुको कुरा के परेछ भने सुनसान र एकान्त ठाउँमा उनीहरुको घर, फोहोर फ्याँक्ने ठाउँको उचित व्यवस्थाको अभाव, भर्खरै बैवाहिक जिवनमा गाँसिएका हँुदा परिवार नियोजनका स्थायी साधन प्रयोग गर्न अलि मिलेनछ । अब के गर्ने भनी उनीहरुले कन्डमको प्रयोग गर्न थालेछन् । अब कता फ्याँक्ने, घरमा अरुले देखे लाज हुने भन्ने ठानेर सबैभन्दा गोप्य ठाउँका रुपमा ट्वाईलेट देखेछन् ।
स्नेही आमा ! यी घटनाले गर्दा मेरो दिमागमा कन्डमकै भूत चलेको थियो । मैले यसपछि हिँड्दा, डुल्दा, विद्यालय जाँदा, बाटोमा नियालेर हेर्न थालें । बाटोे, गल्ली, खाल्डो, हस्पिटल जताततै खुलम्खुल्ला फ्याकिएका कन्डम देखिनथाले । सहरदेखि गाउँसम्म जताततै अव्यवस्थित रुपमा फ्याँकिएका वेवारिसे रबरका खोल । हुँदाहुँदा हस्पिटल वरपर, पिकनिक स्थल, विद्यालय–कलेजका ट्वाईलेटदेखि लिएर मन्दिर परिसर वरपरसम्म पनि । अलि अध्याँरो, ओसिलो र खाल्डाखुल्डीको त कुरै छोड्नुहोस् ।
एक दिनको कुरा हो, म मेरो शोधपत्रको प्रस्तुति सकेर दीक्षान्त समारोहका लागि आवश्यक कार्यपत्र र फर्म लिएर दौडादौड गर्दै थिएँ । निश्चित समयको घेरावन्दीका कारण मलाई सास फेर्नेसम्म फुर्सत थिएन । बाहिर पानी परिरहेको थियो । सम्पूर्ण कागजपत्र बुझाउन अफिस जानुथियो । एक हातमा कागजपत्र र अर्को हातमा छाता समाउँदै दौडिन थालेँ । अनायास म चिप्लिएर भुँइमा लडें । हतारमा म दुःखाईको वास्ता नगरिकनै उठ्न खोजें । उठ्दा त मेरो छातासँगै प्लाष्टिकजस्तो वस्तु टाँसीएर आयो । म त्यसलाई टक्टक्याउन लागें । त्यो त त्यही कन्डम पो रहेछ ।
यस्ता प्रसङ्गबाट के बुझिन्छ भने सबैले यौनलाई मानिसमा उत्पन्न हुने प्राकृतिक आवश्यकताका रुपमा लिने गरेका छन् । स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने पनि यो एउटा जैविक आवश्यकता हो भने अर्कोतर्फ सृष्टिलाई निरन्तरता दिने माध्यम पनि । हामी भोक लागेपछि खाना खान्छौ, भोक मेट्छौं, पाचन प्रकृया, दिसापिसाबका रुपमा शरीर बाहिर फ्याक्छौं । तर हामी दिसा, पिसाब सबैका अगाडि खुलमखल्ला गर्न सक्छौं र ? पक्कै पनि सक्दैनौं ।
चेतनशील मानिसले बच्चा र अशक्त अवस्थामा बाहेक जथाभावी फोहोर गर्न सक्तैन । दिसापिसाबका लागि उसले ट्वाईलेटको खोजी गर्छ र मलत्यागपछि फ्लस् गर्छ । दिसापिसाबलाई जताततै फ्यात्त फ्याँक्न हुँदैन भन्ने ज्ञान उसमा छ । ठिक त्यस्तै हो कन्डम पनि, प्रयोग गरीसकेपछि सही टुङ्गामा त्यसलाई विसर्जन गर्ने ज्ञान हुनपर्छ ।